Ogaden News Agency (ONA) – Qof Kastoo Lasoo Shaqeeyay Cabdi Iley Waa Eedaysane Inuu Wax Ka Qoro DDSPOST – Noora Afgaab
Qof Kastoo Lasoo Shaqeeyay Cabdi Iley Waa Eedaysane Inuu Wax Ka Qoro DDSPOST – Noora Afgaab
Posted by ONA Admin	/ January 16, 2015
Dad badan oo gaadhaya ilaa 200 oo qof ayaa lasoo xidhay labadii habeen uu u dambaysay ka dib markii kooxda Cabdi Iley ku xeeran ay arkeen arima badan oo sir u ahaa oo shabakaddaha lagu soo qoray. Dadkan lasoo xidh-xidhay ayaa tuhun ah inay iyagu qoraan ama sirta u gudbiyaan shabakadda DDSPOST lagu haystaa. Shabakaddan ayaa gaadhsiisay Cabdi iley iyo koxdiisa heer ay waalli ku dhawaadaan, wuxuuna hadda ka shakiyay qof kasta oo hawlihiisa wax ka ogayd oo uu isleeyahay mar umbay sirtaasi sii dayn doonaan.
Dadk lasoo xidh-xidhay ayaa waxaa ka mid ah qaar loo haysto inay taageeraan kooxdii kasoo ku kacsanayd Cabdi Iley oo la tuhunsan yahay inay kacdoon kale bilaabayaan ka dib markay ogaadeen inuusan Cabdi Iley iyo kooxda ku xeeran ayna aaminaynin ilaa ay ku hubsadaan meelahay isla garanayaan oon dhimasho iyo nolol toona ahayn.
Dadka la xidhay ayaa la sheegayaa inay ka mid yihiin qaar xilal kala duwan ka soo qabtay kililka oo wasiiro lagu sheegay qaarkood.
Wararka la’isla dhex marayo magaalada Jigjiga ayaa sheegaya inay hadda talada farahiisa kasii baxayso cabdi Iley ka dib markuu cidwalba godob ka galay. Waxyaabaha kale lagu sheekaysto ayaa waxaa ka mid ah ra’yiga dadka qaarkood oo ku odhanaya Cabdi Iley ka hor dadweyanah reer miyiga ah gaar ahaan ma’aanay aqoonin wax macnaha isticmaarka, hadase reer miyiga ayaa cidwalba ka taqaana inay gumaysi ku jiraan.